घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के ? मेलमिलाप कसरी ? - Khabar Break
काठमाडौं । दलभित्र घेराबन्दीमा पारिएपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित कदम के हुनेछ ? नेकपाका माथिल्ला नेताहरूले समेत भेउ पाउन सकेका छैनन्। ओलीपक्षीय स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले नेताहरूबीच एजेन्डामा भन्दा पनि अन्य विषयमै असमझदारी र अविश्वास बढेको छ। त्यसैले समाधानको खोजी हुन नसकेको हो। पहिले ती अविश्वास र असमझदारी बढाउने कामलाई नेताहरूले अन्त्य गर्नुपर्छ। अनि, विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुपर्छ। समाधान निस्किन्छ’, विश्वकर्माले अन्नपूर्णसँग भने। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
विकल्प ३ :
संविधानको धारा ७६ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीमा बहुमत सिद्ध गरेर संसदीय दलको नेता कायम रहिरहन सकेमा उनलाई पार्टीले निर्णय गर्दैमा मात्र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने छैन।
ओलीले अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा दिन नचाहे उनलाई संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पहिले नै त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको नामसहित जानुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा विपक्षी कांग्रेसलगायतलाई पनि नेकपाका नेताहरूले सरकार अदलबदलको खेलमा तान्नुपर्ने हुन्छ। ओलीसँग अहिले उनीहरू निकट नेताहरूकै दाबीमा प्रतिनिधिसभाको १७४ सांसदमध्ये ७८ जना नेता छन् भन्ने देखिन्छ। ओलीले संसदमा बहुमत सिद्ध गरे भने पनि पार्टीले हटाउँदैमा मात्र पनि ओलीलाई हटाउन नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
कतिपय नेताका प्रस्ताव यस्ता छन्– प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीमा अध्यक्षमा सेरेमोनियल (मानार्थ) बनाउने। दाहाललाई कार्यकारी अधिकार परिभाषित गरेर पार्टी चलाउन दिने। ओली मर्यादाक्रममा १ नम्बरमै रहेर अध्यक्ष रहे पनि पार्टी काममा चासो नदिने। दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा वरिष्ठ नेताहरूसँग समन्वय र समझदारीका आधारमा पार्टी चलाउने। यसको विषयमा ठोस विधि परिभाषित गरेर जाने। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिदेखि ऐन कानुन निर्माणजस्ता विषयमा शीर्ष नेताहरूको राय मान्ने। त्यसका लागि संयन्त्र बनाउने। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रदेश सरकारमा केही हेरफर गर्ने। ‘यसरी सहमतिको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि नेताहरूले कोसिस गरिरहेका छन्’, ओली निकट स्थायी समिति सदस्य विश्वकर्मा भन्छन्।